ဂိမ်း Booster အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » ဂိမ်း Booster - မြန်နှုန်းဂိမ်းများပိုမိုမြန်ဆန်လိုလားသူ 2019 Play
ဂိမ်း Booster - မြန်နှုန်းဂိမ်းများပိုမိုမြန်ဆန်လိုလားသူ 2019 APK ကို Play
ဂိမ်း Booster သငျသညျလျော့နည်းသုံးနေပြီနှင့်ပိုပြီးတုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချောမွေ့ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဂိမ်းအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်သင့်ကြောင်းစွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုထပ်တိုးပေးမည်ဟုဆိုလေ၏။
သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း app များကိုစတင်ရန်နှင့်ခိုးတဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါအဆင့်မြင့်ဂိမ်းအာနိသင်တိုးမြှင့် app တစ်ခုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မြန်နှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ Real-time အတွက်မြန်နှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်ကကစားစဉ်ပေါ် မူတည်. 1.2 ကြိမ်မှ memory space ကိုတက်တက်လွှတ်ပေးခြင်း။
GameBooster သင့်ရဲ့ Android device ကို၏အစစ်အမှန် performance ကိုတိုက်ဖျက်မည်ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ device ကိုတကယ် max ကို potencial နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုမြင်ချင်လျှင်, သင်ယခုကြိုးစားသင့်!
ဂိမ်း Booster app ကိုသင့်ဂိမ်းများအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်ကူညီပေးသည်။ မှတ်ဉာဏ်သင့်ဂိမ်းများပိုတက်နေရာလွတ်စတင်ဂိမ်းမှာချက်ချင်းလွတ်မြောက်ဒါကြောင့်သင့်ကစားချောမွေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဂိမ်း Booster သင့်ရဲ့ Android ဂိမ်းကစားဘို့အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်မြှင့်တင်ရန်သင့်ရဲ့ဖုန်းမှတ်ဉာဏ် & နီးစပ်အသုံးမပြုတဲ့ apps များ / တာဝန်များကိုတက်လွှတ်ပေးခြင်း။
ဂိမ်း Booster သင့်ရဲ့ Android ဂိမ်းကစားဘို့အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်မြှင့်တင်ရန်သင့်ရဲ့ဖုန်းမှတ်ဉာဏ် & နီးစပ်အသုံးမပြုတဲ့ apps များ / တာဝန်များကိုတက်လွှတ်ပေးခြင်း။ ဒီ app ကိုလည်းသင်သည်သင်၏ဂိမ်းသတ်မှတ်ထားသောဖုန်းကိုပတ်ဝန်းကျင်လျှောက်ထားရန်ရှေးခယျြနိုငျရှိရာ "ဂိမ်း Mode ကို" ပါရှိပါတယ်။
App ကိုအားလုံး devices များနှင့် tablet နှင့်အတူထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တောင်မှအနိမ့် RAM ကိုစက်ကိရိယာများပေါ်တွင် run ။
* ဂိမ်း Booster ၏အင်္ဂါရပ်များ:
* ဂိမ်း Play စ Mode ကို:
- တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းအဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံးကစားစတိုင်သတ်မှတ်နှင့်ဂိမ်းကစား mode ကိုအတွင်း app ကိုမြှင့်တင်ရန်, လိုပဲအော့ဖ်လိုင်း Mode ကို, Long က Play စ Mode ကို Play ။
- သင့်ရွေးချယ်မှုရဲ့အကောင်းဆုံး setting ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် Modes သာစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
- Configure မိုဘိုင်း-Data ကို, Bluetooth Brightness ကို, မျက်နှာပြင်လှည့်, ဒေတာများကို auto-Sync ကိုနှင့်အသံ။
* သင့်ရဲ့ဂိမ်းရန်သင့်အကြိုက်ဆုံး mode ကိုသတ်မှတ်။
* မလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းများကို & apps များသေများနှင့်အကောင်းဆုံးဂိမ်းအတွေ့အကြုံအတွက်မှတ်ဉာဏ် empties ။
သင့်ရဲ့ဂိမ်းများနှင့် app များကိုမြှင့်တင်ရန် * တစ်ခုမှာနှိပ်ပါ! သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအစွမ်းထက်ပါစေ။
* App ကို Booster သုံးပြီးမည်သည့် app ကိုအဘို့မှတ်ဉာဏ် (RAM ကို) အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ။
* ဂိမ်း Booster သင့်ရဲ့ Android device ကို၏အစစ်အမှန် performance ကိုတိုက်ဖျက်မည်ပါလိမ့်မယ်။
တတ်နိုင်သမျှ * သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှတ်ဉာဏ်။
* သင်မြှင့်တင်ရန်လိုခငျြဆိုဂိမ်းနှင့် apps ထည့်ပါ။
* သင်မြှင့်တင်ရန်ချင်သော app ကိုအပေါ်ထိပုတ်ပါ။
* ဂိမ်း Booster ကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ device များပေါ်မှာရှိသမျှမလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များပိတ်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။
* အဆိုပါရွေးချယ်ထားသည့်ဂိမ်းနှင့် apps များကိုအလိုအလျောက်တိုးမြှင်နှင့်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။
သငျသညျဂိမ်း Booster နဲ့တူပါလျှင်5ကြယ်ပွပြန်လည်သုံးသပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပါ။
ဂိမ်း Booster - မြန်နှုန်းဂိမ်းများပိုမိုမြန်ဆန်လိုလားသူ 2019 Play
3.69 ကို MB